Property Advertisements ::: iMyanmarHouse.com
မှ 100 (သိန်း) 200 (သိန်း) 300 (သိန်း) 400 (သိန်း) 500 (သိန်း) 600 (သိန်း) 700 (သိန်း) 800 (သိန်း) 900 (သိန်း) 1000 (သိန်း)
အတွင်း 100 (သိန်း) 200 (သိန်း) 300 (သိန်း) 400 (သိန်း) 500 (သိန်း) 600 (သိန်း) 700 (သိန်း) 800 (သိန်း) 900 (သိန်း) 1000 (သိန်း) 1000 (သိန်း) နှင့်အထက်
တာမွေ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
4.50 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
တိုက်​ခန်းအကျယ်​ ၂၃×၅၀​ ​ပေ ဒုတိယထပ်​
ကြည့်မြင်တိုင် ပွဲစားလမ်း တိုက်ခန်းကျယ် ငှားမည်
ကြည့်မြင်တိုင်	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
ကြည့်မြင်တိုင် ပွဲစားလမ်း တိုက်ခန်းကျယ် (၆)လွှာ ပေ-15×50=(Hall)ခန်းပါ မီးဖိုချောင်ခန်း ရေချိုးခန်း အိမ်သာ ဘေစင်မီးဖိုခုံပါဝင်သည် ~~~~~~~~~~~~~~ အငှား တစ်လ ၂ သိန်း
🏫 လသာမြို့နယ် တိုက်ခန်း အငှါး 💸 ငှါးရမ်းခ တစ်လ ၃သိန်းပါ။ 📌 (၁၂ ပေခွဲ x ပေ ၅၀ ) 📌 ၂ ခန်း ရှိပါတယ်။ 📌 Hall Type ဖြစ်ပါတယ်။ 📌 ၄လွှာ ၂၂လမ်း ငှါးရန် ၂ခန်းရှိပါသည်...
လသာ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
🏫 လသာမြို့နယ် တိုက်ခန်း အငှါး 💸 ငှါးရမ်းခ တစ်လ ၃သိန်းပါ။ 📌 (၁၂ ပေခွဲ x ပေ ၅၀ ) 📌 ၂ ခန်း ရှိပါတယ်။ 📌 Hall Type ဖြစ်ပါတယ်။ 📌 ၄လွှာ ၂၂လမ်း ငှါးရန် ၂ခန်းရှိပါသည်
မရမ်းကုန်း	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၂ပေခွဲx၅၀ပေ ပထမထပ်​တိုက်​ခန်း(ပြင်​ဆင်​ပြီး)ငှားရန်​ရှိသည်​ ကြွေပြားခင်း ကြွေပြားကပ်​ပြီး ဘုရားစင်​ပါပြီး Aluminium slide door တပ်​ဆင်​ပြီး ဈေးနီး ကျောင်းနီး...
3.50 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
၇ လွှာ ဓာတ်လှေကားပါ ကိုယ်ပိုင်မီတာ ရေမီး အစုံ အလုံးစုံပြင်ဆင်ပြီး
အလုံမြို့နယ်​ လမ်းကျယ်​​ဈေးနီး.ကားမှတ်​တိုင်​နီး (12½'x50')2BR.ပါ​ကေးခင်း.ပြင်​ဆင်​ပြီး. တိုက်​သစ်​.​ဈေးနီး​ကျောင်းနီး .ကားမှတ်​မှတ်​တိုင်​နီး.​​နေထိုင်​ရန်​​​ကောင်း. သွားလာ​ရေ�...
အလုံ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2.50 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
အလုံ ဆင်​မင်း​ဈေးနီး (12½'x50')2BR .ပါ​ကေးခငိး. ​မီးဖိုခန်း​ကြွေခင်း. ပြင်​ဆင်​ပြီး. အသင့်​​နေ​.​ဈေးနီး. ​ကျောင်းနီး.ကားမှတ်​တိုင်​နီး....
(၁၈×၅၂)ပေ ၊ တိုက်ခန်းကျယ် (အသင့်နေထိုင်နိုင်)
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
4 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
ပုဇွန်တောင်ကျီတော်အိမ်ရာ ၊ ကျီတော်လမ်း ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် (၁၈×၅၂)ပေ ၊ တိုက်ခန်းကျယ် ၊ အိပ်ခန်း -3ခန်း ၊ ရုံး ခန်း . နေ အိမ် နေရာ ကောင်း ဈေးနီး ကျောင်းနီး...
hpa an villa
ဘားအံ	| ကရင်ပြည်နယ်
1 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ဆင်မလိုက်မှတ်အနီး အခန်းကျယ် ပေ(20'×45') 1F-hall ပါကေးခင်း ဗိုလ်ထိုင်အိမ်သာပါ ဈေး ဆေးရုံး လှည်းတန်းနှင့်ဘယ်နေရာမဆို သွားလာမှုအဆင်ပြေသော နေရာတွင်တည်ရှိပါတယ်...
1 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ညှိနိူင်းဈေးဖြင့် ဌါးမည်/ရောင်းမည်။ ***စပေါ်ငွေဖြင့် ဌါးမည်။ 1) *အရောင်း(သိန်း၁၂၀၀) *ဌါး( $900) * 1400 Sqf * အိပ်ခန်း ၂ခန်း၊ ကျွန်းပါကေ၊ AC, ရေချိုးခန်းအားလုံးပါတယ်။ * Lift, gym, swimming...
ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် (မဒဂုံ )
ဒဂုံမြို့ သစ် မြောက်ပိုင်း	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
850 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
တိုက်ခန်းအရောင်း / ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် (၈၅၀-သိန်း) ညှိနှိုင်း မြောက်ဒဂုံ ၃၄ သစ်တောရပ်ကွက် လမ်းသန့် ဦးဝိစာရဒဲ့ပေါက် အကျယ် 19 - 54 ပေ မြေညီထပ် အလုံးစုံပြင်ဆင်ထားပြီး 1 - master bathroom 1- single room Aircon -2 စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနေလိုသူများအတွက်နေရာကောင်းလေး။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း 09895808532...
သာကေတ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
280 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
ဈေးနီး/ကျောင်းနီး သာကေတရုပ်ရှင်ရုံနှင့်တမှတ်တိုင် မြင်တော်သာလမ်းမကြီးအနီး ပန်းခြံ / အားကစားကွင်း လမ်းထိပ်တွင်ရှိ ရဲစခန်း / သာကေတ စာတိုက်ရှေ့တည့်တည့် လမ်း ရန်ကုန်မြစ်ဝမှလာသောလေကိုရူရှိုက်ရင်း Starcity ကို မြင်ရသောအကွါဝေးတွင်ရှိပါသည် ဟော တိုက်/ ကန်ထရိုတ်တိုက်များရှိ အတိုင်းပါဝင်ပါသည် / မိသားစုနှင့် အေးချမ်းစွာနေနိုင်သောရပ်ကွက် သာကေတရဲ့အလှဆုံး မြင်ကွင်းများနှင့် ကားပါကင်နေရာလည်းကျယ်ပါသည်...
ထန်းတပင်	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
25 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ .🏫🏫🏫=အိမ်ယာမြေကွက်များကို(၁၀)လအရစ်ကျစနစ်ဖြစ်ရောင်း ချပေးပါသည်။ ⛳⛳⛳=ရန်ကုန်တိုင်း/ထန်းတပင်မြို့နယ်/အပြင်သဲဖြူကျေးရွာ 🔢🔢🔢=ပေ(20-60)တစ်ကွက်လျှင်=၂၅သိန်းကျပ် 📨📨📨=ပုံစံ/၁၀၅ - ...
သုဝဏ္ဏမြို့နယ်၊ သံသုမာလမ်းမကြီးအနီးရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခနိး ရောင်းမည်
သင်္ဃန်းကျွန်း	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
755 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် /အမြန်ရောင်းမည် အမှတ် (၈၆၀)၊ ဗိုလ်တေဇ(၄)လမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းတို(ကားအဝင်အထွက်ရှင်း)၊ သံသုမာလမ်းမကြီးမှ ဝင်ယုံ၊ လမ်းသန့် နေထိုင်မှု လူနေမှု စရိုက်သန့် လူနေခွင့်ရရှိပြီးသော အခန်းအသစ်ဆက်ဆက် ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေယုံ အကျယ် 19' x 54' (အကျယ်ကြီးနော်) စတုထ္ထထပ် (အပေါ်မှာ တစ်ထပ်ကျန်) တစ်အိမ်လုံး ကိုရီးယားပါကေး အကောင်းစား (၁၅)နှစ် အာမခံ ခင်းထား၊ မျက်နှာကျက် ဂျက်ဆင်ဘုတ်များ မီးများဖြင့် တစ်အိမ်လုံး အလှဆင်ထားပါတယ်။ အိပ်ခန်း(၂)ခန်းဖွဲ့ပြီး၊ Smart ခြင်လံ...
ဓါတ်လှေကားပါသော တိုက်ခန်း ရောင်းမည်
ဗိုလ်တထောင်	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
680 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
ဓါတ်လှေကားပါသော တိုက်ခန်းရောင်းမည်။ 68,000,000 MMK ( ညှိနှိုင်း ) ရန်ကုန်တိုင်း၊ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ၄၄လမ်း၊ ၇လွှာအခန်း။ စုစုပေါင်း ၈လွှာရှိသောတိုက်၊ တိုက်သက်တမ်း ၇ နှစ်ခန့် ။ အခန်းအကျယ် (၁၂.၅ x ၅၀ ) ပေ၊ အခင်း ကိုရီးယားပါကေး နှင့် ကြွေပြားခင်း။ အခန်းဖွဲ့ထားခြင်းမရှိ၊ ဓါတ်လှေကားပါရှိသည်။ ဘိုကလေးဈေးမှတ်တိုင်မှ လမ်းလျှောက် ၂မိနစ်၊ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူအဆင်ပြေ။ အနီးအနားတွင် ဂမုန်းပွင့်စူပါ၊ ဘိုကလေးဈေး၊ ကျောင်း၊ ဘဏ်၊ စားသောက်ဆိုင် တို့နှင့်လည်းရှိပါသဖြ...
တောင်ဒဂုံ မောင်းမကန်လမ်းကျောကပ် လှော်ကားဒဲ့ပေါက် အသင့်နေပြင်စင်ပြီး အိပ်ခန်းတခန်းပါ AirCom -1 -လုံး/13 * 50 ပထမထပ်အမြန်ရောင်းမည်...
ဒဂုံမြို့ သစ် တောင်ပိုင်း	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
190 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
200 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
သင်္ကန်းကျွန်း ဒါဘာအခန်းရောင်းရန် ၁၈ပေ၅၄ပေ ခေါ်ဈေး၂၀၀သိန်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုလျှင်ပါးပါးလျှော့မည် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် အကျိုးဆောင်များလည်ဖိတ်ခေါ်ပါသည် ဆသရ-09 5073224 9250277558 ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ ဒါဘာခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်။ တံခါးမကြီး၊ Emergency တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက် အားလုံး သံပန်းတပ်ပြီး။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပြီး။ လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး၊ ကားဂိတ်၊ ကျောင်း၊ ဈေး များနှင့် အလွန်နီးသဖြင့် နေထိုင်ရန် အလွန်ကောင်း။ (AKK shopping Mall, Junct...
ရွှေပြည်သာ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
250 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
25ပေ ၆၀ပေ ခြံနဲ့ အိမ်ရောင်းရန် ပြင်ဆင်ပီး သစ်သားအိမ်တအိမ် တွဲလျက် အုတ်အိမ်တအိမ် ရေချိုးခန်း အိမ်သာပါ ချိုးဖြူရေပိုက်တပ်ပီး မီတာပါ
စမ်းချောင်း	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
560 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
6 Fl (15 × 62) အပေါ်တထပ်ကျန်သေးသည် ဈေးနားနီး ကားဂိတ်နားနီး ကိုးထပ်ကြီးဘုရားနားနီး စမ်းချောင်းရဲ့ လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ရပ်ကွက်သန့် ဖြစ်တဲ့ မအူပင်လမ်း ကြွေပြားခင်း ပျဉ်းကတိုး လျှာထိုးခင်း ဗိုထိုင်အိမ်သာ ရေပူ/အေးစနစ်ပါ အုတ်ကန် Overhead tank တို့ပါပြီး 1A/C 1 Pressure Pump မီးမြှင့်စက်တို့လဲပါ ကြိုးဖုန်းလဲပါပါတယ် ဈေးလျော့ အတင်းလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။...
စံ၇ိပ်ငြိမ် ၁ လမ်း ၊ ကမာ၇ွတ် ၊ လမ်းသွယ်လမ်းသန့် အတွင်း တိုက်ခန်းေ၇ာင်း၇န်၇ှိသည်.
ကမာရွတ်	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
500 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
လှည်တန်း၊ စံ၇ိပ်ငြိမ် ၁ လမ်း၊ လမ်းသန့် လမ်းသွယ် အထပ်မြင့် ၆ လွှ့ာ ထပ်ခိုးပါ ( လူနေလို့၇ ) အိပ်ခန်း ၂ ခန်းဖွဲ့ပြီးေ၇ှ့၊နောက် ၀၇ံတာပါ လှည်းတန်းမှတ်တိုင်အနီး ၊ အနော်၇ထာအိမ်ယာဘေးကပ်လျက် အင်းစိန်လမ်းနှင့် ပြည်လမ်းမကြီးကြာှးု...